Category: कथा डबली | Nepali Sahitya Ghar – नेपाली साहित्य घर
Home सिर्जना कथा / लघुकथा कथा डबली
उनी आछामे हजुर्बा । नाम त रणबहादुर पुलामी हो । जीवनका उर्वर समय उनले सपरिवार भारतको आसाममा बिताएको हुनाले अहिले उनी ‘आछामे’ भएका छन् । आछामे कान्छो हुँदै आछामे हजुर्बा भएका छन् । उनलाई जे साइनोले बोलाए पनि आछामे जोडिन्छ, जोडिन्छ । उनकी बुढी सावित्रालाई पनि हरेक साइनाले आछामे जोडेकै	Read more
on: माघ १५ , २०७८ शनिबार- ०९:३९
“नमस्कार ।” परिचारिका बोलिन् । “न… ।” मेरो वाक्य फुटेन । अक्मकिएँ म । अकल्पित व्यक्तिको त्यो उपस्थिति, त्यो सत्कार । आश्चर्यचकित भावमा अनायासै टोलाएँ म, बोलुँ कि नबोलुँको दोसाँधमा । सपना या विपना, छुट्याउनै नसक्ने आवस्थामाभैmँ ठिङ्ग उभिरहेँ । र, उनको वदनमा एकोहोरो आँखा गाडिरहें, सम्भवतः यसै भएको	Read more
on: पुष २४ , २०७८ शनिबार- १०:०५
“ल, पर्सी जाने निधो भयो कान्छा ! तिमीसमेत नौजना भयौँ । जग्गु र हरिरामले गाडीको व्यवस्था गर्दैछन् । पर्सि बिहान चारै बजे हिँड्ने कुरा छ ।” कम्पनीको गेट अगाडि उभिइरहेका डिलाराम वि.क.लाई शेरबहादर ऐडीले आउँदाआउँदै भन्यो । घर जान पाउने सन्देश सुन्दा पनि डिलाराममा कुनै उत्साह जाग्न सकेन ।	Read more
on: पुष १० , २०७८ शनिबार- १०:०८
कारागार भनेको थरि थरिका अपराधीका साथसाथै निरपराधीको पनि बासस्थान हो । निवास हो । वास्तवमा जेल बाहिर बसेका मान्छे सबै निर्दोष हुन्छन् भन्ने कृुरा पनि होइन र जेलभित्र परेका सबै मान्छे दोषी हुन्छन् भन्ने कुरा पनि होइन । कति अवस्थामा त खुँखार अपराधी पनि छाडा साँढे जस्तै बाहिर डुक्रिँदै	Read more
on: पुष १ , २०७८ बिहीबार- १२:३२
दर्शकहरुको स्वास ठ्याम्मै रोकिएको जस्तो र हृदयको स्पन्दन ह्वात्तै बढेको भएको थियो । उनीहरु सुरुदेखि नै यस्तै लोमहर्षक अवस्थाको पर्खाइमा थिए । सेप्टेम्बरको महिना, मिरमिरे बिहानीको बेला थियो, पुणेको खड्की फुटबल मैदान दर्शकहरुले खचाखच भरिएको थियो । चारैतिर भिडी हाल डिस ! रोयल अगाडि बढ ! जस्ता नाराहरुबाट खेल	Read more
on: मंसिर २१ , २०७८ मंगलवार- १०:१७
राति साढे दस बज्न लागेको हुन्छ। सिक्किम हाउस, दिल्लीमा सिक्किम राज्यबाट आउनुभएका एकजना सज्जनलाई भेटेपछि घर आउन ओला बुक गर्छु। सिक्किम हाउसदेखि मेरो कुटिया मात्र चार किलोमिटर टाढा छ। मेरो कुटिया त कसरी भन्नु र! सरकारी घरमा भाडा तिरेर यसो बस्ने मेलो। चार चक्के वाहन बुक गरेको, केही समयमा बुकिङ्ग	Read more
गौरी – गुरुदत्त ज्ञवाली
on: कार्तिक २३ , २०७८ मंगलवार- ०७:३९
आनन्दले अनलाइनका लघुकथाहरु पढ्दै थिए । एउटा कथामा पुगेपछि उनका आँखा टक्क अडिए । उनले सररर पढे । मन छोयो । त्यसपछि उनले ती कथाकारका अरु कथा पनि पढ्दै गए । कथाहरु सरल भाषामा लेखिएका राम्रा थिए । राम्रा त थिए तर कतिपय कथा अलि प्रेममय । शृङ्गारिक साहित्य	Read more
on: कार्तिक ८ , २०७८ सोमबार- ०९:०७
कोठा सर्दासर्दा दिक्क भइसकेको हरिनारायणलाई फेरि कोठा सर्नुपर्ने भयो। त्यो पनि अर्को स्टेटमा। उसको क्यालिफोर्नियाको राजधानी स्याक्रोम्यान्टोमा सरूवा भएको थियो। शुरुमा त सुरक्षित ठाउँ हेर्नुपर्यो। अनि काम गर्ने ठाउँको पायक पर्ने ठाउँ हुनुपर्यो। असल छिमेकीहरू भएको हुनुपर्यो। यसो तरकारी किराना पसल नजिक भए झन् उत्तम। सफासुग्घर र ध्वनिको	Read more